May 29, 2019 - CeleLove
အမေရှိတုန်းလေးကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ ကျောင်းထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ ဇွန်ပြည့် …..
May 29, 2019 Cele Love 0
အမေရှိတုန်းလေးကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့ ကျောင်းထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ ဇွန်ပြည့် ….. မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆပ်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာက လူတိုင်းရဖို့လွယ်ကူလှတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်သလို ၊ သား၊သမီးတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေလေးမဟုတ်ပါဘူး ။အခြေနေနဲ့ကံအကြောင်းတရားရဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်သာ ဒီလိုအခွင့်ရေးမျိုးရှိကြတာပါ ။ တချို့ကျတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ မိဘကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့သလို တချို့ကျရင်လည်း ပူဆွေးသောQင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေကိုသိအောင် ဖော်ပြလိုက် ရပါတယ် …။ ဇွန်ပြည့်က “ အမေ့အခြေနေက အခုတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပါပြီ။ အရင်ကထက်စာရင်မောလည်းမမောတော့ဘူး […]
ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီးအသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ …။
ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီးအသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ …။ ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ ! သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး … အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ …။ အောက်ကျပေးရတာကို မရှက်ပါနဲ့! ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ့်မာနကြောင့် လက်လွှတ်ပေး လိုက […]
ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မသေပါဘူး ဆဲနေတဲ့သူတွေ ကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မတ်မတ် ဗီဒီယိုဖိုင်
ဒီအမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မသေပါဘူး ဆဲနေတဲ့သူတွေ ကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မတ်မတ် ဗီဒီယိုဖိုင် အခုလက်ရှိအချိန် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေကာ တချို့ကတော့ သူဘက်က ရပ်တည်တယ် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ဆဲရေတိုင်းထွာခြင်းတွေကို ခံနေရတဲ့ မီးသတ်နဲ့နောက်ဆုံး ပြဿနာတတ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကတော့ သူတင်ခဲ့တဲ့ Live လွှင့်ပြီး သေမယ်ဆိုတဲ့ […]
Relationship တစ်ခု ကြာကြာမြဲချင်သူတွေ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် (၅)ချက်
Relationship တစ်ခု ကြာကြာမြဲချင်သူတွေ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် (၅)ချက် RS အသစ်စတင်ပြီးဆိုကတည်းက စိတ်လူပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေ ဖြတ်သန်းကြရင် တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သိလာကြပါတယ်။ အစကောင်းနေမှ RS တစ်ခုက ရေရှည်တည်မြဲသွားမှာပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် လက်တွဲသွားချင်သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာဖို့ […]
“ စားရကောင်းမှန်းမသိကြတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် စိန်ပန်းပွင့်သုတ်နှင့် ကျန်းမာရေး ”
“ စားရကောင်းမှန်းမသိကြတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် စိန်ပန်းပွင့်သုတ်နှင့် ကျန်းမာရေး ” စိန်ပန်းပွင့်ကို ဆီးချိုရောဂါ အသည်းကိုကာကွယ်တာအရောင်ကျဆေး ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိ ဝမ်းချုပ်တဲ့လူ အဆစ်အမြစ်ရောင် ငှက်ဖျား အရေပြားပြည်တည်နာ ကင်ဆာဆဲလ်ကို သတ်တဲ့အစွမ်းလေတခြမ်းဖြတ် လူနာ တွေမှာ အသုံးပြုကြတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ် …။ ပွင့်ဖတ်ခြွေ ပွင့်ညှာလည်း ဖယ် […]
ခြေထောက်က အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး
ခြေထောက်က အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး ပျိုမေ အမာရွတ် တွေဟာ တကယ်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အမာရွတ်တွေ ရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်း လျော့နည်း သလို စိတ်ကျဉ်း ကျပ်ပြီး ရှက်ရွံ့သလိုလည်း ခံစားရ ပါတယ် […]
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်…..ဖတ်ကြည့်ပါ ။
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်…..ဖတ်ကြည့်ပါ ။ သင့်ရဲ့နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+ … (နာမည်မှာ ”K” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျှုိ့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ … (အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး) […]
မေ့တတ်လွန်းတဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ(၈)မျိုး
မေ့တတ်လွန်းတဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ(၈)မျိုး အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်က ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှု လွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရေးပျက်တာများရင်၊ အစားအသောက်ပုံမှန်မစားသောက်ရင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများရင် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီး ပညာရေးနဲ့အလုပ်ခွင်မှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်လျော့နည်းနေရင် ဒီအစားအစာတွေများများစားပေးလိုက်ပါ နော် …။ (၁) အခွံမာသီးများ၊ အစေ့အဆန်များ အခွံမာသီးတွေနဲ့ အစေ့အဆန်တွေမှာ […]
၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့ မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီ မုဒိန်းကျင့်မှု
၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့ မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီ မုဒိန်းကျင့်မှု ၆ နှစ်​သမီး​လေးကို..လယ်​ကွင်းထဲ​ခေါ်သွားပြီး…မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီး အဓမ္မဆန်စွာပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား … ရန်​ကုန်​​ရေ…​လာပြန်​ပြီ သက်​ငယ်​မုဒိမ်း..ဒဂုံအ​ရှေ့ (၁၄ )ရပ်​ကွက်​မှာ.(၂၇.၅.၂၀၁၉)ရက်​​နေ့ ည.(၁၂း၄၀ )ချိန်​..၆ နှစ်​သမီး​လေးကို..လယ်​ကွင်းထဲ​ခေါ်သွား ခဲ့ ပြီး … မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီး.အဓမ္မမဆန်စွာဖြင့်​.​ကာမရယူ လူမဆန်​တဲ့လုပ်​ရပ်​နဲ့ထားပစ်​ခဲ့တယ် က​လေးသတိရချိန်​မှာ […]
စိတ်ကြီးစိတ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ခမ်းနားကြီးကျယ်လွန်းလှတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသူအမျိုးသမီး …
စိတ်ကြီးစိတ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ခမ်းနားကြီးကျယ်လွန်းလှတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသူအမျိုးသမီး … စိတ်ရဲ့ စွမ်းအားက သိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ ဟိုရက်က မလင်းဇာနည်ဇော်က fbမှာ “မမေသဉ္ဇာဦး အိမ်တက်ပွဲ အိမ်ကြီးက လှလိုက်တာ ခမ်းနားလိုက်တာ” ဆိုတာတွေ တင်ထားတော့ စိတ်ထဲမှာ “ဟင် မဇာကြီးက ငါတို့လည်း မဖိတ်ဘူး …. […]